Nin xaaskiisa dhagaha ka guray - BBC Somali
Image caption Zarina ayaa ku sugan isbitaalka, xaaladeeduna way dagan tahay
Haweeney 23 sano jir ah oo u dhalatay dalka Afqaanistaan ayaa BBC-da u sheegtay in seygeeda uu xirxiray oo uu ka jaray labada dhagood kaddib muran ku saabsan arrimaha qoyska.
Arrintan ayaa ka dhacday gobolka Balkh ee ku yaalla woqooyiga dalkaasi.
Haweeneydan oo lagu magacaabo Zarina ayaa hadda lagu soo waramayaa in xaaladdeeda ay caadi tahay basle ay maskaxiyan isku buuqsan tahay.
Waxa ay sheegtay in aysan gelin wax dambi ah ayna ogaynba sababta uu ninkeeda dhibkan ugu gaystay.
Booliska dalkaasi ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ninka falkan geystay uu u cararay dhanka degmada Kashinda oo uu hadda ku dhuumaaleysanayo.
Hindiya: Majaajileeste loo xiray inuu haween ku dhunkaday waddooyinka
Caro ka dhalatay kufsiga gabdho Soomaaliyeed
Zarina ayaa warbaahinta Pajhwor u sheegtay in ninkeeda uu hurdo ka soo kacay oo uu dhibkaasi u gaystay iyada oo aysan dhicin wax muran ah oo dhex maray, waxa ayna BBC-da u sheegtay muddo dheer uu aad u xumaa xiriirka iyaga iyo ninkeeda.
Wareysi ay siisay telefishinka Tolo ayaa Zarina waxa ay ka cabatay in ninkeeda uu isku dayay in uu ka horjoogsado in ay booqato waalidiinteeda.
Waxa ay intaasi ku dartay inaysan doonayn in ay nolol dambe ay wadaagaan.
Image caption Zarina waxay sheegtay inaysanba rabin ninkeeda
Waxa ay sheegtay in ninkeeda uu yahay nin shaki badan oo inta badan ku eedeeya in ay ragga kale la hadasho marka ay booqato reerkeeda, waxa ayna dalbatay in si deg deg ah gacanta loogu soo dhigo oo maxkamad la soo taago.
Dhibaatada ku dhacday Zarina ayaa ka mid ah dhacdooyin dhanka qoyska ah oo ka dhacay dalkaasi, kuwaasi oo intooda badan ka dhan ah dumarka.
Dowladda dalkaasi Afqaanistaan ayaa dhowr jeer oo hore sheegtay in ay isku dayday in ay soo saarto sharci haweenka looga badbaadinayo gabood fallada la xiriira arrimaha qoyska.
Image caption Reza Gul waa haweenay u dhalatay Afqaanistaan oo horay ninkeeda uu sanka uga gooyay
Balse madaxweyne Xamid Karzai ayaa markii u horreysay ee uu xukunka qabtay waxa uu ku guul dareystay ama uu iska indho tiray in uu saxiixo sharci noocaasi ah inkastoo labada aqal ee uu ka kooban yahay baarlamaanka dalkaasi uu ansixiyay sharcigaasi.
Sanadkii 2014-kii waxa uu dalbaday in isbadal lagu sameyo sharcigaasi, waxaana dadka siyaasaddiisa naqdiya ay sheegeen in isbadalkaasi uu aad u yareynayo caddaaladdii ay heli lahaayeen dhibanayaasha ay arrintani haleeshay.
Madaxweyne Ashraf Ghani oo xilka kala wareegay Karzai ayaa isna wali aan saxiixin hindise sharciyeed ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka dalkaasi, waxaana sharcigaasi looga gol-lahaa in looga hortago tacaddiyada ka dhanka ah dumarka.